iOS 10 beta ကို developer တစ်ယောက်အနေနဲ့ဘယ်လို install မလဲ ငါက Mac ကပါ
အသုံးချ | | iOS ကို, NOTICIAS, လဲ tutorial
ပြီးခဲ့သည့်တနင်္လာနေ့ည မှစတင်၍ ပထမဆုံး beta ၏ iOS 10 သို့သော်ယခုအချိန်တွင်ဤပဏာမဗားရှင်းသည် developer များသာရည်ရွယ်သည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းပရိုဂရမ်တွင်စာရင်းသွင်းခြင်းနှင့်၎င်းကိုသင်၏ထုတ်ကုန်များပေါ်တွင်ဒေါင်းလုပ် လုပ်၍ တပ်ဆင်ရန်နှစ်စဉ်ယူရို ၉၉ ဒေါ်လာပေးဆောင်ရသည်။ သို့သော်၊ သင်ဟာ developer တစ်ယောက်မဟုတ်ရင်တောင်၊ သတင်းတွေအားလုံးကိုစပြီးစတင်စမ်းသပ်နိုင်ပါတယ် iOS 10။ အောက်မှာဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာမင်းတို့ကိုပြောပြတယ်။
iOS 10 ကိုယခုသင့် iPhone နှင့် iPad ပေါ်တွင်တင်ထားပါ
၏ပထမ ဦး ဆုံးအများပြည်သူ beta ကို iOS 10 ဒါဟာဇူလိုင်လသည်အထိရရှိနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ, တကယ်တော့တစ်လမျှဘာမှမကျန်တော့ဘူး၊ ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ထဲကတချို့ကမခံနိုင်ဘူး၊ ဒါကြောင့် Applelizados မှာငါတို့ iPhone နှင့် iPad ထုတ်ကုန်များပေါ်တွင်အက်ပဲလ်၏မိုဘိုင်း operating system အသစ်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်နေသောစာရေးဆရာများဖြစ်နေသည်။
သင်ဆက်လက်မလုပ်ဆောင်မီကျွန်ုပ်တို့သည်စမ်းသပ်မှုအဆင့်တွင်ဗားရှင်းတစ်ခုကိုကျွန်ုပ်တို့ရင်ဆိုင်နေရသည်ကိုမမေ့သင့်ပါ iOS 10 အချို့သော application များနှင့်အချို့သောချို့ယွင်းချက်များစသည်ဖြင့်ဖြစ်နိုင်သည်။ ယခုအချိန်တွင်အမှန်တရားမှာ၎င်းသည်အလွန်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်ပြီး application များအကြားအကူးအပြောင်းတွင်အနည်းငယ်နှေးကွေးသော်လည်းအချို့သောအရာသည်သင်တပ်ဆင်ထားသည့်အက်ပလီကေးရှင်းများနှင့် ၄ င်းတို့စနစ်အသစ်နှင့်လိုက်လျောညီထွေမှုရှိခြင်းအပေါ်မူတည်လိမ့်မည်။
ထိုအရာနှင့်အတူပထမအဆင့်မှာသင်၏ device ကို iCloud သို့မဟုတ် iTunes သို့အရန်ကူးရန်ဖြစ်သည်။ ဤနည်းသည်ဆိုပါက iOS 10 iOS 9.3.2 ကိုတရားမျှတစွာဖြင့်ပြန်သွားနိုင်သည်ကိုမယုံကြည်သေးပါ သင့် iPhone သို့မဟုတ် iPad ကိုပြန်ယူပါ.
မသန်စွမ်း iOS 10 beta 1 ကို iOS XNUMX beta XNUMX ကို install လုပ်ပြီး developer တစ်ယောက်မပါပဲ install လုပ်ပါ အောက်ပါအဆင့်များကိုသင်လိုက်နာရုံသာဖြစ်သည် -
Safari မှသင်၏ iOS ထုတ်ကုန်မှဒေါင်းလုပ်လုပ်ပါ ဒီ file ကို Terminal ထဲမှာ "Download" ကိုနှိပ်ပြီးဖန်သားပြင်အလယ်မှာတွေ့ရလိမ့်မယ်။
ပရိုဖိုင်းတပ်ဆင်မှု ၀ င်းဒိုးပွင့်လာလိမ့်မည်။ သင့်တွင်အများဆိုင် beta ပရိုဂရမ်ပရိုဖိုင်းတစ်ခုရှိပြီးသားဆိုလျှင်၎င်းကိုသင်ပထမ ဦး ဆုံးဖယ်ထုတ်ရန်လိုအပ်သည်။
ပရိုဖိုင်းကို install လုပ်ပါ။
ချိန်ညှိချက်များ / ချိန်ညှိချက်များအက်ပ်ကိုဖွင့ ်၍ General → Software update ကိုသွားပါ။ သငျသညျ၏ download, သင်မြင်လိမ့်မည် iOS 10 ရရှိနိုင်အဖြစ်စာရင်း။
ယခုသင်သာပုံမှန်အပ်ဒိတ်အဖြစ်ကဲ့သို့၎င်းကို download လုပ်ပြီးထည့်သွင်းရန်သာလိုအပ်သည်။ ကျွန်တော့်ကိစ္စမှာ iPhone6Plus အတွက် ၁.၇ GB အလေးချိန်ရှိပြီးမိနစ် ၃၀ လောက်ကြာတယ်။
လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးပြီးဆုံးသွားလျှင်သင်အားလုံးခံစားနိုင်ပါလိမ့်မည် iOS 10 မှာဘာအသစ်လဲနောက်ဆုံးဘယ်လိုဖယ်ရှားပစ်မလဲ အခြားအများအကြားဇာတိ applications များ (စတော့ဈေးကွက်၊ အကြံပြုချက်များ၊ ရာသီဥတု ... ) ။
ယခုမှစ။ , အသစ်တစ်ခုကို beta ကိုဗားရှင်းအခါတိုင်း iOS 10ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီးထည့်သွင်းရန်အတွက်ရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်။
ကြိုးစားကြည့်ဝံ့ iOS 10? မင်းပြီးပြီလား အင်္ဂါရပ်အသစ်များသည်မည်သည့်အရာနှင့်တူသနည်း။ မင်းဘာကိုလွမ်း ငါတို့လိုချင်တဲ့ "မှောင်မိုက်တဲ့ mode" ဖြစ်နိုင်တယ်။ အရာအားလုံးကိုပြောပြပါ၊ ဘာမှမပိတ်ပါနဲ့ !! 😬
ရင်းမြစ် Apple5× 1
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Apple ကထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ » iOS ကို » iOS 10 beta ကို developer မလိုပဲ install လုပ်နည်း
မည်သည့်ဖိုင်ကို download လုပ်ရမည်နည်း။ ဘယ်ကပါလဲ? ဘာမှမပေါ်လာဘူး။
Xosef Jos သို့ပြန်သွားပါ
ကျွန်ုပ်တွင်လက်ရှိအများပြည်သူ beta 9.3.3 ကို iPhone 6S plus တွင် install လုပ်ပြီး appwatch (မည်သည့် beta မဆို၊ ၄ င်းနှင့်သက်ဆိုင်သော watchOS 2.2.1 ဗားရှင်းနှင့်) ချိတ်ဆက်ထားပါသည်။ အားလုံးမှန်ကန်စွာအလုပ်လုပ်သည်
iOS10 ၏အများဆိုင် beta ကို download လုပ်ပြီး version 2.2.1 ကို applewatch တွင်သိမ်းထားပါကကျွန်ုပ်နှစ် ဦး စလုံးအကြားပြproblemနာတစ်စုံတစ်ရာရှိပါသလား။
အန်ဒိုနီ လက်ရှိအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်မည်သည့်ပြproblemsနာမျှမရှိသေးပါ၊ သို့သော်၎င်းသည် beta ဗားရှင်း၊ စမ်းသပ်မှုများဖြစ်ကြောင်းနှင့်၎င်းကိုအသုံးချပရိုဂရမ်များနှင့်မပါဘဲယေဘုယျအားဖြင့်မဟုတ်လျှင်အချို့သော bug များတင်ပြနိုင်ကြောင်းသတိရပါ။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ သင်သည် iOS9၏နောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်းသို့အမြဲတမ်းပြန်သွားနိုင်ပြီးထိုနေရာမှနောက်ဆုံးပေါ်အများပြည်သူ beta ကိုပြန်လည်တပ်ဆင်ပါ။
ဆော့ဖ်ဝဲရေးသားသူမရှိဘဲ macOS Sierra beta ကိုမည်သို့တပ်ဆင်ရမည်နည်း
MacOS code သည် OLED panel နှင့် ပတ်သက်၍ MacBook Pros များတွင်သဲလွန်စရှိသည်